ပင်မစာမျက်နှာ ဂေါက်သီးဘောလုံး ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Kaka"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, ဆက်ဆံရေးဟာဘဝ, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သည့်ရီကာဒို Kaka အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ရီကာဒို Izecson dos Santos Leite AKA '' Kaka '' Brasilia အတွက်ဧပြီလ 22, ဖက်ဒရယ်ခရိုင်, ဘရာဇီး၏ 1982nd နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
သူကသူ့မိခင်, ဆီမှ dos Santos (ဟောင်းတစ်ဦးမူလတန်းကျောင်းဆရာ) နှင့် Bosco Izecson Pereira Leite (ကအငြိမ်းစားအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာ) အားမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
သူကသူ့ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကျောင်းနှင့်ဘောလုံးနှစ်ဦးစလုံးကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဘဏ္ဍာရေးအလုံခြုံကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ သူကခုနစျပါးခဲ့တဲ့အခါ, Kakáရဲ့မိသားစုသို့ပြောင်းရွှေ့ ဆောပိုလို.
သူ့ရှေ့မှာအများအပြားကဲ့သို့ပင် Kaka ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူခစျြတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအကျောင်းမှပထမဦးဆုံးမိမိအခွက်တဆယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသခံလူငယ်ကလပ်အတွက်သူ့ကိုစီစဉ်ပေး "Alphaville," ။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝအချိန်
Kaka သည်သူ၏ကလပ်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲအတွက်ဖိုင်နယ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကသူ့ကိုနောက်ထပ်ဇာတိမြို့ကလပ်အားဖြင့် scouted ခံရဖို့လုပ် ဆောပိုလိုအသင်းသူ့ကိုလူငယ်အကယ်ဒမီအတွက်နေရာတစ်နေရာပူဇော်သောသူ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
သူမ 15 အခါ Kaka သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရည်းစားကယ်ရိုလိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့သူထိုအချိန်က 20 ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူမအတွက်ကျောင်းနေဆဲနေစဉ်ဤ 2002 အတွက်ဖြစ်ပျက် ဘရာဇီး။ သူတို့ဟာအချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌နက်ရှိုင်းစွာကျဆင်းခဲ့သည်။ (မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတွက်) တောင်မှအကွာအဝေးကသူတို့ကိုခွဲထုတ်လို့မရဘူး။ နှစ်ဦးစလုံးKakáအဘို့ကစားရန်ဝေးခဲ့တဲ့အခြိနျမှာသူတို့ရဲ့ထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့ အေစီမီလန်။ သူကပျောက်ခဲ့တာနေစဉ်, Celico အတွက် Kaka ရဲ့ဘုရားကျောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဘရာဇီး နောက်ပိုင်းတွင်ရှိသမျှတို့, သူမ၏ရည်းစားရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမှန်ဆိုသည်ကား, ကယ်ရိုလိုင်းကအရမ်းလှပသစ်စာနဲ့တစ်ကိုင်းရှိုင်းခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်။ Kaka နာမည်ကြီးသူမိန်းမငယ်အားအဆိုပြုမတိုင်မီသူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးအပျိုကညာခဲ့ကွှေးကျွောခဲ့။
သူတို့ကဆောပိုလိုတွင်ခရစ်တော်အသင်းတော်၌လူကြိုက်များသောတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းမှာဒီဇင်ဘာလ 23 ၏ 2005rd အပေါ်လက်ထပ်တယ်။
သား Lucas Celico Leite (10 ဇွန်လ 2008 မွေးဖွား) နှင့်: အဆိုပါစုံတွဲသည်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီး Isabella (23 ဧပြီလ 2011 မွေးဖွား) ။ နှစ်ဦးစလုံးကိုအောက်တွင်မြင်ကြသကဲ့သို့မိမိအဘထံသို့အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည်။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါကွာရှင်းပုံပြင်
2015 ခုနှစ်, Kakáနှင့် Celico လူမှုရေးမီဒီယာကနေတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ကွာရှင်းကြေညာခဲ့သည်။ သူ၏စကားအတွက် ..."ကျနော်တို့ကအတူတကွကိုးနှစ်အကြာတွင်ကျနော်တို့လေ့ကွာရှင်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြကြောင်းပြည်သူ့စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုအကြှနျုပျတို့သဒါအလှနျကိုခစျြတျောမူသောနှစ်ခုလှပသောကလေးများပေးထားတယျ။ အရေးကြီး၏အလငျး၌ ဆက်ဆံရေးကျနော်တို့က, လေးစားမှု, ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရှိသည်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, အချင်းချင်းအဘို့အကြည်ညိုလေးစားမှုအပြန်အလှန်နဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြောင်းလဲမှု၏ထိုကဲ့သို့သောအခိုက်၌အကြှနျုပျတို့၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်သင့်ကိုယ်ချင်းစာနှင့်နားလည်မှုအဘို့အမေးပါ။ "
မိမိအထွ-ဇနီး Celico ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသ ... "လူ cheats သောအခါ, သူ့ဇနီးပျက်ကွက်ကြောင်းဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပါပဲ။ " သူမ၏စကားများ Kaka ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကသူတို့ကွာရှင်းခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကွာရှင်းစေသောအရာကိုအဖြစ်သဲလွန်စကိုပေး၏။
24 ဒီဇင်ဘာလ 2016 တွင်, Kaka သူ Instagram ကိုအပေါ်သူ၏ 9.8million နောက်လိုက်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုအတွက်ဘရာဇီးလ်မော်ဒယ်လ်ရိုလိုင်းနား Dias ချိန်းတွေ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါစုံတွဲကို Sao Paulo အတွက်လူးကပ်စ Moura ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်ထင်ကြေး၏လအကြာနှောင်းပိုင်းတွင် 2016 ခုနှစ်တွင်ကယ်ရိုလိုင်း Celico တရားဝင်သူမကဘရာဇီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Eduardo Scarpa နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအဇနီးဟောင်းနှင့်သူရှိပါတယ်နံပါတ်တစ်ရန်သူ၏ဓာတ်ပုံကိုမြင်သောအခါ Kaka စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒိုသည်သူ၏သစ်ကိုမတ်ေတာ၏အလွန်ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုတာခံရဖို့ပုံရသည်။
ကယ်ရိုလိုင်း Celico အပေါ်ပြောင်းရွှေ့ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
ဖခင်: Kaka ရဲ့အဖေ, Bosco Izecson Pereira Leite လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံအငြိမ်းစားအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ့သားနှစ်ယောက် (Kaka နှင့်Digão) ကိုသင့်လျော်ကြီးပြင်းတယ်သေချာစေခဲ့သည်။ သူတို့ကဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေကြီးပြင်းလာခံကနေဝေးခဲ့ကြသည်။ သူကသူတို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအိပ်မက်ကိုရှေးခယျြနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပညာရေးနှင့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ အောက်တွင် Bosco Izecson Pereira Leite နှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးအသား, Little က Kaka ဖြစ်ပါတယ်။
Bosco Izecson Pereira Leite အနည်းငယ်သာ Kaka
Mother: Kaka ရဲ့မိခင်; ဆီမှ dos Santos သူမ၏, Kaka နှင့်သူမ၏မိသားစု၏ကျန်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတည်ဆောက်ထားပြီးသူတစ်ဦးအငြိမ်းစားမူလတန်းကျောင်းဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမူလတန်းကျောင်းဆရာမဖြစ်ခြင်းသူမရဲ့သူမ၏မိသားစုဒိုင်းနမစ်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရစေတော်မူ၏။ ဆီမှ dos Santos ဘုရားသခင်အား Kaka ရဲ့ရငျးနှီးမှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အလွန်နီးကပ်ဖြစ်ကြသည်။
Kaka နှင့် Mum- ဆီမှ dos Santos
အစ်ကို: Digãoအဖြစ်လူသိများရိုဒရီဂို Manuel Izecson dos Santos Leite (14 အောက်တိုဘာလ 1985 မွေးဖွား), တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဘရာဇီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားနှင့် Kaka ၏တစ်ခုတည်းသောအစ်ကိုအနားယူခဲ့သည်။ သူကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရက်ပေါင်းကာလအတွင်းဗဟိုနောက်ခံလူအဖြစ်ကစားခဲ့ပါတယ်။
As Bleachers အစီရင်ခံစာ ဒါကြောင့်ကိုထည့်လေ့မရှိ, Digão၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးသူကိုကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 10 ဘောလုံးညီအစ်ကိုများ၏စာရင်းအကြားဖြစ်ပါသည်။ Digãoအဘို့ကစား အေစီမီလန် ပျက်ကွက်သည့်သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆက်လက်အမေရိကန်တိုက်ကြီးမှပြန်လာမီတနှစ်အဘို့။
ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူတစ်ဦးစီးရီးအေအပေါ်အစဉ်အဆက်တည် ထား. ခြေအရှိဆုံးမင်ျဂကစားသမားတစ်ဦးအစေးအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကပရိတ်သတ်တွေကသူ၏တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက် (နာမ်) ဖြစ်ပါသည်ဟုပြော Kaka ဖြစ်နိုင်သမျှတိုင်းလမ်းအတွက်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, Digãoတစ်ဦးရည်မှန်းချက်သွင်းယူခြင်းမရှိဘဲမိမိအတစ်ခုလုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သာ 38 ဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာဘောလုံးခေါ်တော်မူမဟုတ်ခဲ့မွငျလြှငျ 32 ၏အစောပိုင်းနှစ်အရွယ်တွင်အနားယူခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သူ့မေတ္တာအသက်တာ၌ရရှိခဲ့တယ်။ သူဗိသုကာပညာရှင် Rebeca Sabino မှပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်သည်။ Kakáမင်္ဂလာဆောင်၏ခေါင်းကိုင်အဖေဖြစ်ခဲ့သည်။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဆိုပါရေကူးကန်မတော်တဆ
18 ၏အသက်အရွယ်မှာKakáရေကူးကန်မတော်တဆမှု၏ရလဒ်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သွက်ချာပါဒ-inducing ကျောရိုးကျိုးခံစားခဲ့ရသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာသူတစ်ဦးအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကသူ့ဘုရားကျောင်းကသူ့ဝင်ငွေ tithed မှစ. ဘုရားသခငျအားမိမိပြန်လည်နာလန်ထူ attributes နဲ့ရှိပါတယ်။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နာမည်ပြောင်၏မူလအစ
သူ့ညီ (အကောင်းဆုံးDigãoအဖြစ်လူသိများ) ရိုဒရီဂိုနှင့်ဝမ်းကွဲက Eduardo Delani ကိုလည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများဖြစ်ကြသည်။
Digãoသူ့ကိုကိုခေါ် "Caca" စီရင်ရန်သူ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့် "ရီကာဒို" သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါ။ အသံထွက်၏မရှိခြင်းနောက်ဆုံးမှာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သို့ပြောင်းလဲ ''Kaká ''. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. '' Kaka '' အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ပေါ်တူဂီဘာသာပြန်ချက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ကလေးတွေသောအခါအောက်တွင် Kaka နှင့်သူ၏ဆိအစ်ကို၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
Little က Kaka နှင့်Digão
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူ၏ယုံကြည်ခြင်း
သူ 12 ၏အသက်အရွယ်မှာဘာသာတရားကိုဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့သည်: "ငါကတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သောယုံကြည်ခြင်းကြောင်းသိရှိခဲ့၏။ " Kaka ကပြောပါတယ်။
သူကများသောအားဖြင့်မိမိအထုတ်ဖေါ်ရန်သူ၏ဂျာစီကိုဖယ်ရှားမှလူသိများသည် "ငါသည်ယေရှုအားမိမိရဲ့ တီရှပ်။ Kaka လည်းတက်ကြွစွာပွဲများ၏နောက်ဆုံးပီပီပြီးနောက်ဆုတောင်းပဌနာအချိန်လေးအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူဘရာဇီးရဲ့ 2002 ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီးလုပ်ခဲ့တယ်, မီလန်ရဲ့ 2004 Scudetto နှင့် 2007 ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှု။
ယင်းအတွက်အာဂျင်တီးနားကျော်ဘရာဇီးရဲ့ 4-1 အနိုင်ရရှိအပြီးတွင် Post-ပွဲအခမ်းအနားအတွင်းမှာတော့ 2005 Confederations Cup နောက်ဆုံးသူနဲ့သူ့အသင်းဖော်များ၏တော်တော်များများကိုဖတ်ရှုကြောင်းကို T-ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင် "ယေရှုသင်ကခစျြ" အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပါ။
2007 အတွက်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးသမားတစ်နှစ်တာ၏ဆုလက်ခံရရှိနေချိန်တွင်သူကငယ်ရွယ်စဉ်အခါကသူ့ကိုဆောပိုလိုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဖြစ်နှင့်အဘို့တယောက်ဂိမ်းကစားရန်လိုကြောင်းပြောသည် ဘရာဇီး အမျိုးသားရေးအသင်းဒါပေမယ့် "ဘုရားသခငျသသူသည်အစဉ်အမြဲမေးခဲ့တယ်ထက်ပိုမို [သူ့ကို] ကိုပေး၏။ "
ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်, Kakáရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂီတအမျိုးအစားယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်လည်းကျမ်းစာနေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့်အင်တာဗျူးတွင် ဘရာဇီး ရုပ်မြင်သံကြား အို Globo, Kaka အနားယူပြီးနောက်တစ်ဦးဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာဖြစ်လာဖို့အလိုတော်ထင်ရှား။
ရီကာဒို Kaka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အဘယ်အရာကိုသူအဘို့ကိုအောကျမေ့နေသည်
မိမိအကာကွယ်ရေး-ပိုင်းခြား 'passes သည်။
, အမြန်အားကောင်းတဲ့, တမျးနဲ့ Hard-အလုပ်လုပ်ဖြစ်ခြင်းသည်။
အတိတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက် dribble ရန်သူ၏စွမ်းရည်သည်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ပြစ်ဒဏ် taker ဖြစ်ခြင်းသည်။
ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!